Chengetedzo chenjedzo: bug mune Sudo CVE-2017-1000367 | Linux Vakapindwa muropa
Chengetedzo chenjedzo: bug mune Sudo CVE-2017-1000367
Pane a kushungurudzika kwakanyanya mune yakakurumbira Sudo chishandiso. Kukanganisika kuri nekuda kwechipenga muchirongwa cheichi chishandiso chinobvumidza chero mushandisi ane musangano muShell (kunyangwe neSELinux inogoneswa) kukwidziridza mikana yekuva mudzi. Dambudziko ririko mukusashanda kweSudo kupatsanura zvirimo / proc / [PID] / stat paunenge uchiedza kuona iyo terminal.
Iyo bhagi yakawanikwa iri chaizvo mukufona tora_process_ttyname () Sudo yeLinux, inova ndiyo inovhura dhairekitori rakambotaurwa kuti uverenge iyo tty nhamba yeiyo tty_nr munda. Uku kunetsekana kwakarongedzwa seCVE-2017-1000367 kunogona kushandiswa kuwana ropafadzo dzehurongwa, sezvandataura, saka zvakanyanyisa uye zvinokanganisa zvakawanda zvinozivikanwa uye zvakakosha kugoverwa. Asi usatyawo, ikozvino tinokuudza maitiro ekuzvidzivirira ...
Zvakanaka, iyo migove yakakanganiswa iri:
Red Hat Enterprise Linux 6, 7 uye Server
Oracle Enterprise 6, 7 uye Server
CentOS Linux 6 uye 7
Debian Wheezy, Jessie, Tambanudza, Sid
Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 16.10 uye 17.04
SuSE LInux Enterpsrise Software Development Kit 12-SP2, Server yeRaspberry Pi 12-SP2, Server 12-SP2 uye Desktop 12-SP2
Naizvozvo, unofanira chigamba kana kugadzirisa yako system ASAP kana iwe uine imwe yeaya masisitimu (kana zvigadzirwa):
ZveDebian uye zvigadzirwa (Ubuntu, ...):
YeRHEL uye zvigadzirwa (CentOS, Oracle, ...):
SuSE uye zvigadzirwa (OpenSUSE, ...):
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chengetedzo chenjedzo: bug mune Sudo CVE-2017-1000367
Ndeipi yaizoshandiswa Archlinux uye pakutanga?
Pindura kuti fedu
Pane zvakakanganiswa pakuisa kodhi. Iye zvino unogona kuzviona.
Kwaziso nekutenda nekuraira.
Zvakanaka, kune arch uye zvigadzirwa sudo pacman -Syyu
Saka ndosaka Sudo yakagadziridzwa ... zvakadaro, chinhu chine njodzi inyaya yekuti hazvizivikanwe kuti ndiani, kunze kweuyo anga aine bhudhi, ndiani zvekare aiziva. Uye izvo zvinogona kuve zvine njodzi.
SteamOS inoramba ichiita zvirinani kunyangwe ichiita sekuneta